I-IEC ilungiselela ukuvota ngesikhathi se-Covid | Scrolla Izindaba
I-IEC ilungiselela ukuvota ngesikhathi se-Covid
Abantu baseNingizimu Afrika bazokwazi ukuvota ngaphansi kwemithetho ye-Covid-19 okokuqala ngqa okhethweni lokuchibiyela oluzoba mhla ziyi-11 kuLwezi.
Ukhetho lokuchibiyela ezigcemeni ezingama-96 luzothinta izifunda ezingama-461 zokuvota kanye nabantu abayizi-615,608 ababhalisele ukuvota.
Iningi lokhetho lokuchibiyela ludalwa ukushona kwamakhansela ngesikhathi somvalelo, ngenkathi amanye amakhansela esula noma umkhandlu kamasipala uhlakazwa.
IKhomishini Yokhetho Ezimele (IEC) inemithetho emisha yabo bonke abavoti nakuzo zonke iziteshi zokuvota.
1. Gqoka isifonyo uma ubhalisa futhi uvota. Uma ungenaso isifonyo noma into yokuvala ubuso, abaphathi bezokhetho 0pppp0 ukungena esiteshini sokuvota futhi ngeke ukwazi ukubhalisa, ukuvuselela ikheli lakho, noma ukuvota.
2. Gcina ibanga elingamamitha ayi-1.5 ukusuka kwabanye abavoti, abaphathi bokhetho, abameli bamaqembu kanye nezingqapheli ngaso sonke isikhathi ngenkathi usesiteshini sakho sokuvota.
3. Linda ithuba lakho ngaphambi kokungena esiteshini sokuvota njengoba kungabuthana abantu abambalwa kuphela ngesikhathi esisodwa enkundleni.
4. I-Liquid sanitiser izofuthwa ezandleni zakho yisikhulu sokhetho ngaphambi kokungena nokushiya esiteshini sokuvota.
5. Izikhulu zokhetho zizohlinzekwa ngezifonyo nezihlangu zobuso ezizogqokwa.
6. Letha ipeni lakho lokugcwalisa amafomu nokumaka amaphepha okuvota esiteshini sokuvota. Kunoma ikuphi, abaphathi bokhetho bazobe behlanza wonke amapeni esiteshini sokuvota ngemuva kokusetshenziswa ngumuntu ngamunye.
7. Uma ufaka isithupha sakho uyinki, abaphathi bokhetho bazobheka ukuthi somile ngaphambi kokufaka uyinki, futhi bazokucela ukuthi ulinde isikhashana ngaphambi kokuthi uqhubeke uqinisekise ukuthi uyinki usuwomile ngaphambi kokuba izandla zakho zihlanzwe uma usuhamba esiteshini sokuvota.
8. Zonke izindawo zesiteshi sokuvota zizosulwa ngotshwala obubulala amagciwane obungama-70% ngaphambi nangemuva kokusetshenziswa.